Antananarivo renivohitra Mitohy ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana
Ankadimbahoaka Bisikileta 500 nogiazana fa nitatitr’olona
Bisikileta manodidina ny 500 nitatitra olona an-tsokosoko no voasakana teny Ankadimbahoaka, omaly maraina.
Fiahiana ara-tsosialy Mahatsiaro an’i Lalao Ravalomanana ireo mpiasan'ny CUA
Mahatsiaro ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ireo mpiasan'ny Kaominina
Fizarana « Vatsy Tsinjo » Nisavorovoro ny teny amin'ny Gymnase Ankorondrano
Nitohy teny amin'ny Gymnase Akorondrano, omaly, ny fizarana « Vatsy Tsinjo » sosialim-bahoaka ho an’ny Boriborintany fahatelo teto Antananarivo Renivohitra. Nisy olona maromaro eo amin'ny 200 eo ho eo mitabataba tany ivelany nangataka ny hahazo,
Andasibe Noana, nitroatra ireo mpisera dia
Ela ny ela fa nitroatra ihany koa ireo mpisera dia ao amin’ny valan-javaboahary ao
Fandrindrana ny fizarana fampiana Nirotsaka an-tsehatra avokoa ny mpiasan’ireo ministera
Niova taranja kely ireo mpiasa eny anivon’ny minisitera samihafa nanomboka tamin’ny faha- 07 aogositra 2020 lasa teo ka ho fiaraha-miasa sy fiaraha-mientan'ireo Minisitera manampy ny ny Governora,
Randrana sendikaly Ho avy eny amin’ny CNaPS indray anio
Ho avy eny amin’ny CNaPS ny randrana sendikaly ao anatin’ny SVS sy ny USAM anio 14 aogositra hitondra ireo sonia 10 000 mahery voaangon’izy ireo, raha ny fanambarana omaly.
Malaimbandy Disadisam-pianakaviana nafara tamin’ny vono olona
Nisy vono olona nitranga tany amin'ny fokontany Tsinjorano kaominina ambanivohitra Malaimbandy,
Mitohy ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana ho an’ny kaominina Antananarivo renivohitra. Ankoatra ireo miorina manakaiky sekoly, hopitaly ary biraom-panjakana dia alana daholo ihany koa ireo miorina eny amin’ny trottoir, lalana natokana ho an’ny mpandeha an-tongotra…
Teny Tsaralalàna sy Isoraka indray no nanohizan’ny kaominina ny asany ny Sabotsy teo. Nomarihin’ny lehiben’ny tsena eo anivon’ny kaominina moa fa tsy hijanona amin’ny fanalana ireo mpivarotra fotsiny ny kaominina fa efa mikatsaka amin’ny fanganana foto-drafitrasa hametrahana azy ireo koa. Ho an’ireo manana taratasy ara-dalana araka izany dia hahazo toerana vaovao izy ireo, tetikasa izay hotanterahina tsy ho ela. Miisa 17 ohatra ireo efa voaisa sy nosoratana anarana hahazo izany eny Tsaralalana eny. Mbola hitohy amina faritra hafa moa ity fanisana mpivarotra hahazo tsena vaovao ity hahafahana manafoana tanteraka ny mpivarotra amoron-dalana eto amintsika.